हेर्नुहोस! सुहागरतकै रातमा बेहुलि फरार कारण थाहा पाउँदा सबै चकित - सुदूर नेपाल
हेर्नुहोस! सुहागरतकै रातमा बेहुलि फरार कारण थाहा पाउँदा सबै चकित
नेपालमा मात्रै नभई भारतमा पनि हरेक दिन नयाँ र अनौठा घटनाहरु भइरहेका छन् । यस्तै भारतमा अर्को अनौठो घटना भएको छ । भारतमा विवाह पछि सुहागरातको रात दुलही भागेकी छिन् । भाग्नुको कारण अझ रोचक रहेको छ । वास्तवमा भएको के हो भने ४० वर्षका एक व्यक्तिले २० वर्षको तस्विर देखाएर केटीसँग विवाह गरेका थिए । यति मात्रै नभई ति व्यक्ति पहिले देखि नैं विवाहित थिए र उनका एक सन्तान पनि रहेका थिए ।
उत्तर प्रदेशका केही दलालहरुले ति व्यक्तिको विवाह गराउँनको लागि दुई लाख भन्दा धेरैं रकम लिएका थिए । ति युवत्तीले २० वर्षको युवा भएको भन्दैं विवाहको लागि राजि भईन तर विवाहको पहिलो रात नैं भागेर गईन् । उनले विवाह गर्दा पनि दुलाहलाई देखेको हुनुपर्छ तर सुहागरातमा के देखेर भागिन् त्यो अहिले निकै सोचनिय कुरा भएको छ । प्रहरीले ति व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएरको छ । अहिले दलालहरुको खोजि भइरहेको छ । प्रहरीले घटनाको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।जनबोली
यो पनि पढ्नुहोस …बजाज मोटरसाइकलले आफ्नो नयाँ क्रुजर मोटरसाइकल बजाज एभेन्जर १६० भारतका विभिन्न डिलरहरुमा बिक्रीका लागि उपलब्ध गराएको छ । यसअघि १८० र २२० सीसीमा मात्रै एभेन्जर बाइक उपलब्ध भएकोमा अब सस्तो भर्सनको रुपमा एभेन्जर १६० समेत उपलब्ध भएको हो । कम्पनीले बनाएको नयाँ एभेन्जर यी दुबै मोडलभन्दा सस्तो रहेको छ । कम्पनीले सिंगल च्यानल एबीएस सहित ल्याएको एभेन्जर १६० को मूल्य ८१ हजार ३६ भारु निर्धारण गरेको छ ।कम्पनीले एभेन्जर १८० को डिजाइनमा एनएस१६० को इन्जिन प्रयोग गरेर एभेन्जर १६० ल्याएको हो । नयाँ एभेन्जरले हालको एभेन्जर १८० बराबरकै पावर दिने कम्पनीको दाबी छ । एभेन्जर १६० मा १६०.३ सीसीको ४ भल्भ आयलकुल्ड इन्जिन रहेको छ । सो इन्जिनले १४.६ बीएचपी पावर तथा १४.६ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ । ५ स्पिडको गियरबक्स जडान गरिएको यो बाइकले ५० किमि माइलेज दिने कम्पनीले बताएको छ । फ्रन्टमा टेलेस्कोप फोर्क तथा रियरमा डबल ग्यास चार्ज्ड सस्पेन्सन दिइएको छ । ताजाखबरबाट
Previous Post: एकसय फिल्म खेलेका यि कलाकार पैसाको अभावमा मृत्युसँग लड्दै !डायपर लगाएर बस्ने अवस्था-भिडियो
Next Post: होसियार ! यी ३ गल्तीले बिगार्छ तपाइँको दाँत ,जोगाउन के गर्ने ?